सॉस भरने मेसिन - Npoat.com
पहिले, टमाटर पेस्ट उत्पादनको महत्त्व के हुन सक्छ?
सॉस उत्पादन विश्वव्यापी रूपमा द्रुत विकासशील र नवीन श्रेणी हो, यसको मूल्य र थपिएको सास उत्पादनहरूको फराकिलो र बढ्दो दायराको साथ छ।
यो तपाइँको उत्पादन र उत्पादन नवीनता मा उच्च मांग राख्छ।
तपाईले तरकारीको प्रशोधनबाट कस्तो प्रकारको सॉस पाउन सक्नुहुन्छ?
फलफूल र तरकारीहरूको प्रशोधनबाट सयौं प्रकारका सॉसहरू पाउन सकिन्छ। (केचअप - राई - लसुन - पेस्ट - टमाटर पेस्ट - बार्बेक सस - मेयोनेज)
सॉस उत्पादनको क्षेत्रको स्थानीय बजार र प्रत्येक क्षेत्रीय स्वादमा आधारित छ
सॉसमा फल वा तरकारीहरू समावेश हुन सक्छन्; या त ताजा, केन्द्रित, स्थिर वा एसेप्टिक प्याकेजि inमा।
अन्य सामग्रीहरू प्रत्येक नुस्खाको लागि आवश्यक छ जस्तै तेल, मसला, प्रकारका सिरका, आदि।
किन बजार प्रवृत्ति सॉस उत्पादन गर्न?
संरक्षक वा थप बिना प्राकृतिक उत्पादनहरू, अधिकतम स्वादको साथ न्यूनतम फ्याट सामग्री।
डिनर टेबलमा पाकराम्परासँगै ल्याउने उच्च-गुणस्तरका सॉसहरू
सुविधाजनक खाना कम्पोनेन्ट सॉसको अधिक विविधता जस्तै पास्ता सॉस, कुकिंग सॉस र करी पेस्ट जसले स्क्र्याच कुकिंगमा समय बचत गर्दछ।
जब तपाईं सासलाई बोतलमा राख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै प्रकारका भर्ने मेशिनहरू छन् जुन तपाईंले रोज्न सक्नुहुन्छ।
NPACK सॉसको लागि भरिने मेसिनहरू र प्याकेजि equipment उपकरणहरू डिजाईन र निर्माण गर्दछ।
हाम्रो सॉस तरल भर्न मेसिनहरू सॉस उद्योगको परिवर्तनकारी आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो। हामी तपाईंको सॉस भरिने आवश्यकताहरू सम्हाल्न र तपाईंको उत्पादन लक्ष्यहरू पूरा गर्न आदर्श मेसिनरी बनाउँछौं।
NPACK सॉस भरने मेसिन पेस्ट, सॉस र तरल भर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। खाना र पेय पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत हेरचाह, कृषि, पशु हेरचाह, औषधि, र रसायनिक फिल्डका लागि उपयुक्त। यो वायमेटिक र इलेक्ट्रिक शक्ति द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ।
यो मेशीन प्रीमियम स्टेनलेस स्टीलको बनेको छ, जंग, जंग, क्षार र एसिड प्रतिरोधी, ठोस र टिकाउ हो। पिस्टन टेफ्लन सामग्रीबाट बनेको हुन्छ। एन्टि-ड्रिप भरने नोजलले सटीक भरिने सुनिश्चित गर्दछ। भरने भोल्यूम: -5--5००० मिलि। शुद्धता: ± ०.।%।
दुबै पेस्ट र तरल पदार्थ, उच्च चिपचिपेपन, मोटा सस कणहरू, जस्तै जाम, सॉस, बदाम बटर, केचअप, सोया सॉस, बीन पेस्ट, सलाद ड्रेसिंग, क्याभियार र यस्तै अन्य भर्नका लागि उपयुक्त।
चटनी भरिने अनुप्रयोगहरूको लागि, तरल भर्न मेसिनरी यस प्रकारको उत्पादनलाई व्यवहार गर्न सक्षम हुनुपर्छ। NPACK ले तरल भर्न उपकरण, cappers, लेबलर, र कन्वेयरहरू को एक धेरै प्रकारको प्रदान गर्दछ जसले ससस भर्न र प्याकेज गर्न सक्दछ अन्य धेरै प्रकारका मोटा तरल पदार्थको साथ। हामीसँग मेसिनरी छ कि चिसो भन्दा कम चिपचिलो पानी पातलो तरल पदार्थको तुलनामा उच्च चिपचिलोपनको तरल पदार्थसँग काम गर्न सक्छ। हामी तपाईको साथ काम गर्न सक्दछौं सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईले आफ्नो अनुप्रयोगको लागि सही सॉस भरने उपकरण पाउनुभयो पूर्ण प्रणालीको लागि।
सॉस भरिने उपकरणको एक प्रणाली स्थापना गर्नुहोस्
सासहरू तिनीहरूको सामग्रीहरूमा निर्भर मोटाईमा भिन्न हुन सक्दछ, त्यसैले यो पक्का गर्नुहोस् कि तपाईंसँग तपाईंको प्याकेजिंग लाइनको लागि सही भरिने उपकरणहरू छन। तरल भरण उपकरणको अतिरिक्त, हामी तपाईंको प्याकेजिंगको आकार र आकार विनिर्देशहरूको आधारमा तपाईंको अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न अन्य प्रकारको तरल प्याकेजि machinery मेशिनरीहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
तरल भर्न प्रक्रिया अनुसरण गर्दै, तपाईं हाम्रो क्यापिंग मेशिनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ धेरै प्रकारका बोतलहरू र जारहरूमा कस्टम आकारको क्यापहरू फिट गर्न। एउटा एयरट्याट क्यापले सॉस उत्पादनहरूलाई चुहावट र स्पिलि fromबाट जोगाउँदछ र तिनीहरूलाई दूषित पदार्थहरूबाट जोगाउँदै। लेबलरहरूले अद्वितीय ब्रान्डि images, छविहरू, पोषण जानकारी, र अन्य पाठ र छविहरूको साथ अनुकूलित उत्पाद लेबलहरू संलग्न गर्न सक्दछन्। कन्वेयरहरूको एउटा प्रणालीले भरिएको र प्याकेजि processes प्रक्रिया भरि विभिन्न प्रकारको गति सेटि atहरूमा अनुकूलन कन्फिगरेसनमा सस उत्पादनहरू बोक्न सक्दछ। तपाईंको सुविधामा भरपर्दो चटनी भरने मेसिनहरूको पूर्ण संयोजनको साथ, तपाईं एक कुशल उत्पादन लाइनबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई धेरै बर्षको लागि लगातार परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
तपाईंको सुविधामा एक अनुकूलन सॉस प्याकेजिंग प्रणाली एकीकृत गर्नुहोस्
हामीबाट उपलब्ध सबै तरल भरण तथा प्याकेजि equipment उपकरणहरूले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको उत्पादन लाइनहरू सॉस र अन्य धेरै उत्पादनहरूको लागि पूर्ण रूपमा अनुकूलित गर्न दिन्छ। हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं कि कुन मेसिनरी तपाईंको अनुप्रयोगको लागि राम्रो काम गर्दछ र कस्टम कन्फिगरेसन डिजाइन गर्न तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न। हामी तपाईंलाई मेशिन चयन र कार्यान्वयनको साथ मद्दत गर्नेछौं। NPACK को सहयोगमा तपाई आफ्नो प्याकेजि line लाइनको दक्षता र नाफा अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ।
NPACK मा सॉस फिलि Mach मेशिन भन्दा बढि पाउनुहोस्
सॉस फिलि machines मेशिनको साथसाथै, हामी सेवाहरूको चयन पनि प्रस्ताव गर्दछौं ताकि तपाईं हाम्रा उत्पादनहरूबाट अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी क्षेत्र सेवा, लीज, र उच्च-क्यामेरा सेवाहरू प्रदान गर्दछौं जुन तपाईंको प्याकेजि systems प्रणालीको दीर्घायु अधिकतम बनाउन मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई आवश्यक हुन्छ कि तपाईंको उत्पादन लाइन सुरू देखि अन्तसम्म फल्छ कि भनेर सुनिश्चित गर्न तपाईंलाई आवश्यक छ। हामी तपाईको २/// टेक्निकल समर्थन पनि उपलब्ध गराउँदछौं सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईको सस भरने उपकरण इष्टतम अवस्थामा रहन्छ।
पूर्ण सॉस भरने मेसिन प्रणालीको डिजाईन र एकीकरणमा सुरू गर्न, NPACK आज सम्पर्क गर्नुहोस् र एक विशेषज्ञ तपाईंसँग काम गर्न सक्षम हुनेछ। हामी तपाईंको प्रोजेक्टको विशिष्ट मागहरूको आधारमा उपकरणहरूको पूर्ण अनुकूलित कन्फिगरेशन डिजाइन गर्न सक्छौं।
स्वचालित मह भरने मेसिन / स्वत: जाम भरने मच ...
स्वचालित filling भरिने नोजल तरल / टाँस / सॉस / मह च ...
स्वचालित सोया सॉस सिरका तरल मसला मदिरा भर्न म्याक ...
जाम पिस्टन भरने मेसिन, स्वचालित तातो सॉस भरने मच ...
स्टेनलेस स्टीलको मसाला सॉस कृषि रसायन वनस्पतिहरू ...
स्वचालित खाना पकाउने तेल भरने मेसिन सॉस जाम मह फिलिन ...